သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုသင်ကစဉ်းစားပါသကဲ့သို့တိကျမှန်ကန်သောဖြစ်ပါသည်? - သတင်း Rule
ငါတို့ရှိသမျှသည်အမှုအရာကိုမေ့လျော့ – ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ယုံကြည်ချင်ပါတယ်သကဲ့သို့တိကျမှန်ကန်သတိရဘူးသောအရာဖြစ်ကြ၏?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုသင်ကထင်သကဲ့သို့တိကျမှုဖြစ်?” Pete Etchells ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 8th သြဂုတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 06.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဂိမ်းကစားစိတ်ထဲ: သင်သည်သင်၏မှတ်ဉာဏ်သည်မည်မျှကောင်းသောသဘောရှိ၏ပါဘူး? ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်အမှုအရာကိုမေ့လျော့စေခြင်းငှါ,, ငါတို့မူကားမအောက်မေ့ပါဘူးဥစ္စာတော်တော်လေးတိကျ, မှန်သော? အဆိုပါဒုက္ခသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့လိုလိမ့်မည်ကဲ့သို့မမှားယှငျးနိုငျမဟုတ်ပါဘူး, သငျတို့သအောက်ကရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ဤစမ်းသပ်နိုင်သည်.
အလှည့်အတွက်သုံးစာရင်းများအသီးအသီးအားဖြင့် Read, ဒါပေမယ့်တစုံတယောက်သောသူသည်စကားလုံးအပေါ်ရှည်လျားလွန်းမဖြုန်းပါနဲ့. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းဘို့ Pete Etchells
အထက်ပါသုံးစာရင်းမှာကြည့်လိုက်ပါ, နှင့် ပတ်သက်. တစ်စက္ကန့်စီစကားလုံးဖတ်.
အခုတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောအသိအမှတ်ပြုမှုစမ်းသပ်မှုလုပ်ဖို့တာပေါ့ - အောက်တွင်သင်ကြည့်ရှုရန်အဘို့အစကားများအခြားစာရင်းဖြစ်ပါတယ်. နောက်ကျောကိုကြည့်မရှိရင်, သင်ရုံ scan ဖတ်သုံးယောက်စာရင်း၌ထငျရှားသူတို့အသောကဆင်းသတိပြုပါ. အဘယ်သူမျှမ cheat!
ထိပ်တန်း – ကုလားထိုင် – အိပ် – ထိုင်ခုံ – နှေးနှေး – အားကြီးသော – ဟနေခြင်း – တောင် – ချိုမြိန်
သငျသညျကပြောသည်ဆိုရငျ ထိပ်တန်း, ထိုင်ခုံ နှင့် ဟနေခြင်း စာရင်းရှိကြ၏, သငျသညျအစက်အပြောက်ပေါ်မှာဆိုရင်. ထိုနည်းတူ, သင်ထင်လျှင် နှေးနှေး, ချိုမြိန် နှင့် အားကြီးသော ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ်လာဘူး, သင်သည်လည်းမှန်နေ. အဘယျသို့အကြောင်း ကုလားထိုင်, တောင် နှင့် အိပ် သော်လည်း? သူတို့စာရင်းအတွက်ဖြစ်သင့်နှင့်တူသူတို့အသံ, ဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်လုပ်ဘယ်တော့မှမ. သငျသညျအခြို့မှာဒီပြောက်ကြပေမည်, ဒါပေမယ့်လူအများကြီးဆိုလေ့ရှိပါတယ်, သေသေချာချာတစ်တရားမျှတတဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူ, ထိုစကားလက်ဆောင်ကြ၏.
အတုအယောငျအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် DRM ပါရာဒိုင်း
ဒီစမ်းသပ်မှုကနေကြွလာ တစ်ဦးဂန္ 1995 လေ့လာချက် ဟင်နရီ L ကိုအားဖြင့်. တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဆန်တက္ကသိုလ်မှ Roediger နှင့်ကက်သလင်း McDermott. ဂျိမ်း Deese အားဖြင့်အစောပိုင်းကအလုပ်အပေါ် အခြေခံ. (ဤအရပ်မှထိုနာမကိုအမှီ Deese-Roediger-McDermott, သို့မဟုတ် DRM, ပါရာဒိုင်း), သင်တန်းသားများကိုစကားလုံးစာရင်းဆက်တိုက်ကြားသိ, သောသူတို့သည်ပြီးတော့မှတ်ဉာဏ်မှမှတ်မိရတယ်. ထိုသုတေသနပညာရှင်တစ်ဦးအကျဉ်းစကားလက်ဆုံပြီးနောက်, သင်တန်းသားများထို့နောက်စကားများစာရင်းအသစ်တစ်ခုပေးခဲ့. ဝေဖန်, ဒီစာရင်းသစ်ကနဦးစာရင်း၏အသီးအသီးပေါ်တိုင်းတစ်ခုတည်းကို item နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းအချို့စကားလုံးမြားပါရှိသောဥပမာ -, စဉ် အိပ် စာရင်းပေါ်မှာပေါ်လာမပါဘူး3အထက်, ဒါကြောင့်ပေါ်လာပါဘူးအသီးအသီးသောစကားနှင့်ဆက်စပ်သောင် (အိပ်ရာ, အနားယူ, ငြီးငွေ့, နောက် ... ပြီးတော့).
Related: အဆိုပါ Stroop စမ်းသပ်: သင့်ဘာသာစကားဘယ်လောက်ရောင်စုံဖြစ်ပါသည်?
နောက်တစ်ခု, သင်တန်းသားများကိုသူတို့အသစ်စာရင်းထဲတွင်ထိုစကားသည်ယခင်ကထင်ရှားကြောင်းခဲ့ကြပုံကိုယုံကြည်မှုလို့ပြောခဲ့ရတယ်. Roediger နှင့် McDermott ရဲ့ရလဒ်တွေကိုလူအဆက်စပ်နေသောစကားသည်အသိအမှတ်ပြုရန်အခိုင်အမာပြ (ကဲ့သို့ အိပ်) အကြောင်းအဖြစ်မကြာခဏအမှန်တကယ်စာရင်းအပေါ်ပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်းစကားသည် - ပတ်ပတ်လည် 85% ထိုအချိန်ကာလ၏. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, လူအမှုအရာသတိရဖို့ဟုဆိုကာခဲ့သည်, မျှမျှတတစိတ်ချလက်ချ, ကဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူး.
ဒီသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအရေအတွက်ရှိပါတယ်. Roediger နှင့် McDermott ခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆက်ထားတစျခုမှာအကြံပြုချက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်လူသိများတစ်ခုခုမှပြောပြတယ်; ပေးထားသောစာရင်းထဲတွင်စကားအားလုံးအချင်းချင်းဆက်နွယ်နေသောကြောင့်, သူတို့သည်ငါတို့မှတ်ဉာဏ်အတွက်ဆက်စပ်စကားလုံးမြားကိုသက်ဝင်ဖို့ပိုများပါတယ်. Word ကိုပင်စည်ပြီးစီးတာဝန်များကိုဤအချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ကူညီ. ငါစကားလုံး '' ဘီယာ '' ဟုဆိုလျှင်, ဒီမှာကွက်လပ်ဖြည့်ပါရန်သင့်အားမေးမြန်း:
_ ငါ N က E ကို
သငျသညျ W ပွောဆိုဖို့ပိုဖွယ်ရှိစေခြင်းငှါ, ပင်: D သော်လည်း, F ကို, L ကိုနှင့် M အားလုံးဿုံလက်ခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်. ဘီယာနှင့်စပျစ်ရည်အယူအဆနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင့်ဒါကင်, တမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာမှတ်မိဖို့အခြားလွယ်ကူစေသည်ဟုဆို.
ဒါပေါ့, အခြားအချက်များအ DRM ပါရာဒိုင်းနှင့်အတူကစားသို့ရောက်. သင်စကားလုံးစဉ်းစားနေတာပါသောကြောင့်, ဒါဟာအစဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ, အိပ် သင်ဆက်စပ်စာရင်းဖတ်ရသောအခါ, သငျသညျမှားယွင်းစွာတကယ်တော့သင်ကထင်ဦးဆောင်သော ကိုပြု နောက်ပိုင်းတွင်ရက်နေ့တွင်စကားလုံးဖတ်. မည်သို့ပင်သော်လည်း, အယူမှားအသိအမှတ်ပြုမှု၏လေ့လာမှုများတစ်ချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်အမြဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချင်ပါတယ်သကဲ့သို့တိကျမှုမဟုတျပါ.
← Dyson ဟာ 360 မျက်လုံးဖုန်စုပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Android မှာ 7.0 Nougat ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →